Shiinaha COVID-19 Warshad, CE, Soosaarayaal - Tiknoolajiyadda Daarista (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >COVID-19
Qalabka dhegta ayaa leh faa iidooyinka wanaagsan ee jilicsanaanta, jilicsanaanta iyo raaxada, iwm. Wareegga wareegsan ee dhegta guud ahaan waxaa loo isticmaalaa waji-xireyaasha N95. Waxay dhaaftay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS iyo ilaalinta deegaanka ee ROHS, waxay gaaraysaa waxyaabo aan sun ahayn.
Qalabka dhegaha ayaa leh faa'iidooyinka jilicsanaanta wanaagsan, jilicsanaanta iyo raaxada, iwm. Loop dhegta dhegaha guud ahaan waxaa loo isticmaalaa N95 waji. Waxay dhaaftay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS iyo ilaalinta deegaanka ee ROHS, waxay gaaraysaa waxyaabo aan sun ahayn.
Maqaarkayaga dhalaalay ee la afuufay wuxuu leeyahay wax soo saar wanaagsan. Maaskarada ka hortagga fayraska, dharka dhalaalaya ee la dharbaaxay waa wadnaha maaskaro.Waxa laga gudbay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS iyo ilaalinta deegaanka ee ROHS, waxay gaarayaan waxyaabo aan sun ahayn.
Spunbond-keena wuxuu leeyahay marin hawo wanaagsan iyo iska caabin biyo wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, Spunbond-keena wuxuu leeyahay fiditaan wanaagsan, xitaa haddii loo kala bixiyo bidix iyo midig, waxaa lagu soo celin karaa muuqaalkiisii ​​asalka ahaa.Waxaa laga gudbay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS iyo ilaalinta deegaanka ee ROHS, waxay gaarayaan waxyaabo aan sun ahayn.